Wayne Rooney iyo Zlatan Ibrahimovic Oo Hoggaaminaya Ciyaartooyada U Tartamaya Xiddiga Ugu Fiican Dalka Maraykanka – Cadalool.com
Wayne Rooney iyo Zlatan Ibrahimovic Oo Hoggaaminaya Ciyaartooyada U Tartamaya Xiddiga Ugu Fiican Dalka Maraykanka
Lamaanihii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United eed Wayne ROoney iyo Zlatan Ibrahimovic ayaa hoggaaminaya ciyaartooyada ku tartamaya xiddiga ugu wanaagsan dalka horyaalka waddanka Maraykanka ee MLS.
Rooney oo ah kabtanka kooxda DC United iyo Ibrabimovic oo weerarka uga ciyaara LA Galaxy ayaa kusoo baxay liiska kooban ee xiddigaha dalka Maraykanka ee loo yaqaano MVP, kaddib markii ay bandhig ciyaareed cajiib ah ka sameeyeen xilli ciyaareedkoodii ugu horreeyey.
Rooney oo 33 jir ah ayaa waxa uu DC United u dhaliyey 12 gool iyo toddoba gool oo uu caawiye ka noqday, waxaanu ka saaciday kooxdiisa inay usoo baxdo wareegga Play-offs-ka, laakiin Ibrahimovic oo dhaliyey 22 gool iyo 10 caawin ah ayaa waxa naadigiisa uu usoo saari kari waayey wareeggaas.
Rooney oo hore usoo noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan taariikhda Manchester United ayaa go’aansaday inuu sannadkii hore ee 2017 soo afjaro waayihiisa Old Trafford waxaanu uga wareegay kooxdii uu kusoo kacaamay ee Everton ka hor intii aanu bishii June ee sannadkan u wareegin Maraykanka.
Ibrahimovic oo isaguna hore ugu soo ciyaaray kooxaha PSG, AC Milan, Barcelona, Inter Milan iyo Juventus ayaa bishii March go’aansaday inuu ka tago Manchester United oo uu u wareego kooxda LA Galaxy oo uu kula qaatay xili ciyaareedka horyaalkaas oo hadda dhamaad ku dhow.
Liiska ciyaartooyada iskugu soo hadhay abaal-marinta MVP ee ciyaartoyga ugu wanaagsan horyaalka Maraykanka ee MLS ayaa waxay yihiin shan laacib oo laba ka mid ah ay isku hal koox yihiin, hase yeeshee saddexda kale ayaa kooxo kala duwan ka socda.
Liiska oo dhamaystiran: